Real Madrid Mise Barcelona?Tababaraha Kooxda PSG Ee Unai Emery Oo Sheegay Kooxda Guusha Gaari Doonta Kulanka El Clasico & Waliba Arinta Ka Caawin Doonta Guushaas – Kooxda.com
Home 2017 December France, Spain, Wararka Maanta Real Madrid Mise Barcelona?Tababaraha Kooxda PSG Ee Unai Emery Oo Sheegay Kooxda Guusha Gaari Doonta Kulanka El Clasico & Waliba Arinta Ka Caawin Doonta Guushaas
Real Madrid Mise Barcelona?Tababaraha Kooxda PSG Ee Unai Emery Oo Sheegay Kooxda Guusha Gaari Doonta Kulanka El Clasico & Waliba Arinta Ka Caawin Doonta Guushaas
December 21, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Tababaraha Kooxda PSG ee Unai Emery ayaa shaaca ka qaaday in uu daawan doono kulanka El Clasico ee sida weyn loo sugayo ee dhex mari doonta kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kulan ka tirsan horyaalka La Liga todobaadkiisii 17-aad.
Kooxda PSG ayaa lagu aadiyay Real madrid wareega 16-ka ee tartanka champions league waxana uu tababaraha reer Spain u tagi doonaa si uu u soo daawado.
“Waxa aan tagi doonaa Madrid si aan u soo daawado kulanka El Clasico”ayuu u sheegay Marca.
“Inkasta oo ay labada kooxood is garanayaan hadana waxa ay noqon doontaa ciyaar fiican”.
“In aad ka daawato garoonka ayaa ku siinaysa aragti ka duwan in aad ka daawato Tv-ga”.
“Waxa laba kooxood u dhexeeya farqi aad u weyn laakiin hadii ay jirto koox u sharaxan in ay kulanka guul ka gaarto waa Real Madrid, waayo waxa ay ku ciyaarayaan garoonkooda waxana ay u dagaalamayaan horyaalka”.
“Waxa ay u baahan yihiin 3 dhibcood, garoonkooda ayana muhiim ah kana caawin kara in ay guul gaaraan”ayuu hadalkiisa sii raaciyay